प्रदेश १ को नाम किरात लेख्दा कसले मान्दैन? कहाँबाट आयो कोशी? «
प्रदेश १ को नाम किरात लेख्दा कसले मान्दैन? कहाँबाट आयो कोशी?
प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार ००:०२
-प्रा.डा. युवराज संग्रौला
किरात शब्दको खास परिभाषा मैले पनि यकिन गर्न सकेको छुँइनँ। तर, वैदिक समयका कतिपय संस्कृत ग्रन्थमा किरात शब्द भेटिन्छ। यसर्थ, किरात शब्दको प्रयोग करिब ५–६ हजार वर्ष पुरानो देखिन्छ। किनभने पुराणहरुमा पनि किरात भनिएको छ। अझ किरात शब्दको प्रयोग त्यतिबेलाका कतिपय वैदिक सनातन धर्म ग्रन्थहरुमा लाक्षणिक रुपमा कमजोर देखाउने नभई एउटा सभ्यता रहेको खास सम्प्रदाय वा चरित्र जनाउन किरात शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ।
यस ताललाई काट्न उत्तरतिरबाट एउटा गुरु आए। अर्थात् चिनियाँ गुरु मञ्जुश्री आए। उनी नगरकोट आइपुगेपछि तेलकोटभन्दा मास्तिरको फाँटमा तपस्या बसे। चार दिन तपस्या गरेपछि उत्तरपश्चिमपट्टि एउटा ज्योति देखे। यसपछि उनले उपत्यकालाई भगवानको भूमि बनाउननिम्ति पानी काटेर बस्ती बसाउनतिर लागे। अर्थात्, काठमाडौं उपत्यकालाई असल मानिसहरु बस्ने सभ्यताको केन्द्र बनाउन चोभा (हालको चोभार)बाट पानी काटेर फालियो। र, काठमाडौं उपत्यका मानवबस्ती बस्न लायक बनाइयो।
जसरी वेद जान्ने महर्षि हुन्थ्यो, विद् हुन्थ्यो र ऋषि हुन्थ्यो। सायद मुन्धुम धर्मग्रन्थ र यसमा आधारित दर्शनशास्त्रका ज्ञाताहरुलाई किराती भनिन्थ्यो। जस्तै, को हो भन्दा? महर्षि जनक। यस्तै, यलम्बर किरात। यलम्बर राजा विशिष्ठ र प्रतिष्ठित व्यक्ति भएकाले ऊ किरात हो। अर्थात्, यसको ठीक समकक्षीमा हेर्दा, जसरी हिजो शासनमा गएको एकदम धनाढ्य कुलिन मान्छेलाई आर्य भनिन्थ्यो। यस्तै, किरात भनेको पनि भद्र, ठूलो मान्छे र विद्धान हुन्। यसरी त्यस सम्प्रदायबाट बिस्तारै बढेर गएको सभ्यता, मूल्य, मान्यतालाई अनुसरण गर्दै गएको ठूलो जनसंख्या सबैलाई किरात भनिन थालियो! यसलाई म दाबीचाहिँ गर्दिनँ, तर किरात शब्दको सम्बन्ध ज्ञान, विशिष्ठता र प्रतिष्ठासँग नजोडिएको भए कसैले पनि किरात भन्न गर्व गर्थेनन्। किरात भनेको त्यसबेला सभ्य मानिस भनिएको हो। किराती एउटा सभ्य र असल मानिसलाई सम्बोधन गर्न भनिन्थ्यो। यसकारण मुन्धुम दर्शन र धर्मका मूल्य, मान्यता ग्रहण गरेर समाजको संरचना भयो, त्यो समाजको संरचनाभित्र रहेर ती दर्शन र धर्ममा आधारित संस्कृति मान्ने मानिसलाई नै पछि किरात कहलिए।
यसर्थ, नेपालीले सभ्यताको जगमा आफूलाई पहिचान गर्न जरुरी छ। यसो भएमा एकठाउँको बाहुन र राई एक ठाउँमा उभिन्छन्। अर्को ठाउँको राई र बाहुन अर्को ठाउँ उभिन्छन्। सायद, सभ्यतालाई आधार बनाउन सकिए नेपालको राष्ट्रियता जोड्न सकिन्छ। नेपालका नेपालीलाई जोड्न सकिन्छ। नेपालको भाषा र भूगोललाई जोड्न सकिन्छ। यसपछि एउटा बाहुनले लिम्बु भाषाको प्रेम गर्न थाल्छ। र, सिँजामा एउटा लिम्बु जाँदा नेपाली भाषालाई माया गर्न थाल्छ। जसरी बन्दीपुरमा बसेको नेवारले नेपाली भाषा र नेवारी भाषालाई उतिकै माया गर्छ। जसरी ताप्लेजुङमा बसेको नेवारले लिम्बु भाषा, नेवारी र नेपाली भाषालाई उतिकै माया गर्छ। लामो समयदेखि काठमाडौंभित्र बसेको राईले नेवारी, नेपाली र राई भाषाको माया गर्छ। यो हामीलाई जोड्ने कडी हो। तर, हामीले सभ्यतालाई एकदमै ‘माइनस’ गरिदियौं। सभ्यताबारे छलफलै गरेनौं। संस्कृतिको कुरा ग¥यौं। सभ्यताबारे कुरा गरेनौं। हामीले जम्मै कुरा छाड्यौं। अन्त्यमा आएर हामीले संस्कृति, सभ्यता, धर्म सबैलाई जात भन्ने शब्दमा ल्याइदियौं। यसले गर्दा हामी विवादमा आयौं।
सनातन भन्ने शब्दको अर्थ ‘सर्वत्र’ हो। अंग्रेजीमा ‘युनिभर्सल’ हो। सर्वत्र समयबाट हुन्छ। स्थानबाट पनि हुन्छ। कतिपय विषयवस्तु सनातन समयबाट पनि हुन्छ। लामो समयदेखि चलिआएको सनातन, सबैतिर चलेको सनातन हुन्छ, सर्वत्र भन्ने शब्दको अर्थमा। यसरी हेर्दा, किरात धर्म नमानौं। किरात धर्म होइन, मुन्धुम धर्म हो। मुन्धुम धर्मभित्र कसैले आफूलाई युमा धर्म भन्छन् भने यो उनीहरुको खुसीको कुरा हो। तर, धर्मचाहिँ मुन्धुम हो। मुन्धुमले स्थापित गरेको संस्कार भएकाले मुन्धुम भनिएको हो। अब यस संस्कारलाई अर्कै नाम दिन सकिन्छ भने दिँदा हुन्छ। तर, ग्रन्थचाहिँ मुन्धुम हो। जस्तै, हिन्दुहरुको वेद छ, वेदलाई हिन्दु त भनिएको छैन नि। धर्मचाहिँ हिन्दु हो। ग्रन्थचाहिँ वेद भयो। धर्मचाहिँ हिन्दु भयो।
यसैले ग्रन्थचाहिँ मुन्धुम हो। अब मुन्धुमभित्र याक्खा धर्म भनेपनि भयो। युमा धर्म भनेपनि भयो। लिम्बु धर्म भनेपनि भयो। जे मन लाग्छ त्यो भनेपनि भयो। तर, ग्रन्थचाहिँ मुन्धुमै हो। मुन्धुममा उतिबेला त्यहाँभन्दा पहिलाका अरु मानिसहरुले सुनाएको कुरा स्रंग्रह गरिएकाले मुन्धुम सनातन हो। वेदहरु सनातन हो। यसैले सनातन वैदिक र सनातन मुन्धुम हो। तर, बुद्ध धर्मचाहिँ सनातन होइन। यो बुद्ध धर्म दुईतिरबाट कतिपय राम्रा र नराम्रा कुराको अन्तरक्रियाबाट बुद्धले नयाँ धर्मको रुपमा विकास गरेका हुन्। यो आधुनिक धर्म हो। यो आविष्कार गरिएको हो। मुन्धुम र वेद कसले आविष्कार गरे, त्यो थाहा छैन । तर, बुद्ध धर्म कसले आविष्कार गरेभन्दा शाक्यमुनि बुद्धले यसलाई सूत्रबद्ध गरे भन्ने आउँछ।
पछिल्लो समय दुवैतिरबाट गल्ती भयो। जुन साथीहरुले किरात भनेर उठाउनु भयो, उहाँहरुले जानाजानी बाहुन–क्षत्री र अरु बसोबासीलाई ‘आउट’ गर्ने तरिकाले किरात भनेको जात भन्ने तरिकाले कुरा उठाइदियो। यसरी किरातलाई एकलौटी जातको रुपमा व्याख्या गरिदिन थालिएपछि इतरकाहरु पाखा लाग्न थाले। यसलाई स्वीकारेर सच्याउन जरुरी छ। वास्तवमा, किरात भनेको जात नभएर सभ्यता हो। जातमा लिम्बु हो। लिम्बुभित्र पनि नेम्बाङ हो। सभ्यताको हिसाबले युवराज नेपाली लेख्न पाइन्छ। जीवन किराती लेख्न पाइन्छ। मैले पनि युवराज किराती लेख्न पाउँछु। तर, किराती लेखेँ भने लिम्बु वा राई भन्ने तरिकाले बुझ्ने चलन बढ्यो। किराती लेख्नेबित्तिकै किरातवासी रहेछ भन्ने बुझिदिनुपर्यो। यसमा समस्या छैन। तर, त्यसरी संकीर्णता बढाइयो।
यो कोशी शब्द कहाँबाट आयो? मलाई थाहा छैन । कसरी आयो । यो कोशी भन्ने शब्दको व्याख्याचाहिँ किरातभित्रका खम्बुवान र लिम्बुवान वा मिथिला भाषाबाट आयो वा संस्कृतबाट आयो? यो उहाँहरुले खोज्नु होला। तर, त्यो कोशीवेसिनसम्म जम्मै कोशीहरु भेला भएर आए। त्यहाँ आउँदा माथिबाट बगाएर जुन मल ल्यायो। त्यहीँ मलले उब्जाउ भूमि भएको हुनाले किरातहरुको पनि व्यवसाय चल्यो। किरातहरुको जीवन चल्यो। अरुहरुको पनि चल्यो। अन्ततः किरात सभ्यतालाई नै बोकेर कोशीवेसीको माटोले उठाएको हुनाले मिल्छ भने किरात–कोशी भन्दा पनि हुन्छ।
(राईहरुको साझा सामाजिक संस्था किरात राई यायोक्खाको वार्षिक मुखपत्र ‘निप्सुङ–२०७६’को अंकका लागि तत्कालीन महासचिव जीवन हाताचो राई र केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जम्नेली राईले लिएको अन्तर्वार्ताको अंश हो, त्यसमा ईनयपुस्ता डटकमबाट पनि श्रोत र फोटो लिएको हो । )